Foto Wọwik nke 4 (Malite n’ọnwa Mee Ruo n’ọnwa Ọgọst Afọ 2015) | JW.ORG
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Nahuatl (Central) Ndebele (Zimbabwe) Nepali Ngabere Norwegian Oromo Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tarascan Telugu Thai Turkish Ukrainian Urdu Valencian Yoruba Zulu
Foto Wọwik nke 4 (Malite n’ọnwa Mee Ruo n’ọnwa Ọgọst Afọ 2015)
Lee foto ndị dị ebe a ka ị mata otú ọrụ si na-aga n’ebe Ndịàmà Jehova na-arụ isi ụlọ ọrụ ọhụrụ ha na otú ndị mmadụ si wepụta onwe ha rụọ ọrụ ebe ahụ n’agbata ọnwa Mee na Ọgọst afọ 2015.
Ụlọ ndị a rụcharala arụcha na Wọwik. I si n’aka ekpe n’elu gụwa gaa n’aka nri, ha bụ:
Ebe A Na-arụzi Ụgbọala
Ebe Ndị Ọbịa Na-adọwa Ụgbọala
Ebe A Na-arụzi Ihe na Ebe Ndị Ga-ebi na Wọwik Ga Na-adọwa Ụgbọala
Ụlọ Obibi nke B
Ụlọ Obibi nke D
Ụlọ Obibi nke CH
Ụlọ Obibi nke A
Ihe a rụrụ na Wọwik na Mee 6, afọ 2015
Mgbe a na-etinye ígwè n’ọmarịcha mmiri na-acha anụnụ anụnụ dị na Wọwik. Ígwè a ga-eme ka ihe dị iche iche ghara ịna-adaba n’ebe mmiri a na-esi asọfe.
Ihe a rụrụ na Mee 6, afọ 2015 n’Ebe A Na-arụzi Ihe na n’Ebe Ndị Ga-ebi na Wọwik Ga Na-adọwa Ụgbọala
Ebe e ji siment a gwara agwa na-agba n’ahụ́ paseeji. Isi otú a arụ ya na-eme ka a rụọ ya ngwa ngwa karịa nke a na-awụ awụ.
Ebe onye na-arụ ọrụ na ngalaba na-edekọ ihe ji kamera na-ese ihe ndị a na-arụ. Òtù Na-achị Isi nke Ndịàmà Jehova na-ele foto ndị a kwa izu ka ha mata otú ọrụ si na-aga.
Ihe e mere na Tuzedo na Mee 30, afọ 2015
Mgbe di na nwunye sí n’ebe ndịda Kalifonịa bịara na Tuzedo. Ha ga-arụ ọrụ na Ngalaba Na-ahụ Maka Ili Paịpụ Mmiri. Ha so n’ọtụtụ narị mmadụ ndị bịara ịrụ ọrụ na Wọwik. Ndị ọrụ na-esi na Tuzedo aga ọrụ na Wọwik. N’abalị mbụ n’ọnwa Ọgọst, narị ndị ọrụ ọhụrụ asaa na asaa wụchara na Tuzedo ịrụ ọrụ na Wọwik.
Ihe a rụrụ n’Ụlọ obibi nke B na Jun 9, afọ 2015
Mgbe ndị ọrụ ngo ji kren na-ebugo ahụ́ ụlọ èzí nke ụlọ obibi nke B. Ya bugochaa ya, ndị ọrụ etinyekọtazie ya ọnụ. Ụlọ obibi a bụ ụlọ obibi ikpeazụ e si otú a rụọ ahụ́ ya.
Ihe ndị a rụrụ n’Ụlọ obibi nke CH na nke D na Jun 16, afọ 2015
Ebe onye ọrụ ngo na-etinye paseeji si n’elu ga-ejikọta Ụlọ Obibi CH na D.
Ihe a rụrụ n’Ụlọ obibi nke CH na Jun 25, afọ 2015
Ebe ndị na-achọ ala mma na-akụ ahịhịa n’ebe ndịda ụlọ obibi nke CH.
Ihe a rụrụ na Wọwik na Julaị 2, afọ 2015
Ebe ndị ọrụ na-arụzigharị ọwa mmiri. Mmiri ga na-esi n’ọwa mmiri a na-asọba ná nnukwu olulu mmiri. A rụburu ya n’agbata afọ 1951 na afọ 1959. Ebe ọ bụ na mmiri na-ezokarị n’ebe a, ọwa mmiri a ga-eme ka idei mmiri ghara ịna-akpa Wọwik na ụlọ ndị dị gburugburu ebe ahụ aka ọjọọ.
Ihe ndị a rụrụ n’Ụlọ obibi nke A na Julaị 15, afọ 2015
Ka a ghara inwe ọtụtụ ndị n’ebe a na-arụ ọrụ, a rụrụ ọrụ ụfọdụ ma n’ụtụtụ ma n’abalị. Ọrụ ndị ahụ bụ ite ime ụlọ agba na ifuchi paịpụ ihe. Mgbe ndị na-arụ ọrụ n’ehihie bịara ọrụ, e kenyere ọtụtụ narị mmadụ ịrụ ọrụ malite n’elekere anya atọ nke ehihie ruo n’elekere anya abụọ nke ụtụtụ.
Ihe a rụrụ n’Ụlọ obibi nke D na Julaị 20, afọ 2015
Ebe onye na-etinye ntụ oyi na-akụziri onye ọrụ ibe ya otú e si afụchi paịpụ ihe.
Ihe a rụrụ n’Ụlọ obibi nke B na Julaị 21, afọ 2015
Mgbe a na-ete ígwè ndị ji paseeji si n’elu jikọta Ụlọ obibi nke B na Ebe A Na-arụzi Ihe agba.
Ihe e mere na Tuzedo na Julaị 27, afọ 2015
Ebe ọtụtụ ndị ọrụ na-eche ụgbọala ga-ebu ha gaa ọrụ na Wọwik. Ọtụtụ ụgbọala na-ebu ndị ọrụ bịa, burukwa ha laa ma e mechie ọrụ.
Mgbe a na-akpụ mmadụ atọ só na-arụ ọrụ na Wọwik isi. A na-akpụ ihe karịrị narị mmadụ anọ isi kwa izu n’ebe a na-akpụ isi na Tuzedo, Wọwik, nakwa n’ebe a na-edosa ihe na Mọntgomeri.
Ihe a rụrụ na Wọwik n’Ọgọst 3, afọ 2015
Mgbe a na-arụ ebe ga na-eme ka ime ụlọ na-ekpọkwu ọkụ n’oge oyi, na-emekwa ka ime ụlọ na-ajụkwu oyi n’oge ọkọchị. Ihe a ga-eme ka a ghara ịna-emefu nnukwu ego n’ihe na-ajụ ụlọ oyi nakwa n’ihe na-ekpo ụlọ ọkụ. Ọ ga-emekwa ka ikuku ọjọọ ghara ịna-akpa ebe ahụ aka ọjọọ.
Ihe a nọ na Mọntgomeri nakwa na Niu Yọk mee n’Ọgọst 7, afọ 2015
Ebe a bụ ebe a na-ebubata ngwá ọrụ dị iche iche a na-eji arụ ọrụ na Wọwik. E bubata ha, e tinye ha n’akpa ma buru ha gaa Wọwik.
Ihe e mere na Tuzedo na Niu Yọk, n’Ọgọst 14, afọ 2015
Ebe mmadụ abụọ só na-arụ ọrụ na Wọwik na otu ezinụlọ bí na Wọwik na-eri nri. Ha bụ onye nke abụọ na onye nke atọ ma i si n’aka nri gụrụ gawa. Ọtụtụ Ndịàmà Jehova bí na Wọwik wepụtara ụlọ ha ka ọtụtụ ndị ọrụ biri na ha. Ọ bụkwa ihe ezinụlọ a ị na-ahụ ebe a mere.
Ihe e mere n’Ọgọst 17, afọ 2015 n’Ebe A Na-arụzi Ihe na Ebe Ndị Ga-ebi na Wọwik Ga Na-adọwa Ụgbọala
Ebe otu onye ọrụ ji ihe e ji enyo sọfịa na-enyocha otú ala dị.
Ihe a rụrụ n’Ọfis Ụfọdụ n’Ọgọst 20, afọ 2015
Mgbe e tinyechara windo ụlọ ebe ndị bịara ilegharị anya ga-anọ tupu e dugharịwa ha.
Ihe ndị a rụrụ na Wọwik n’Ọgọst 26, afọ 2015
N’agbata ọnwa Mee na Ọgọst, a rụchara ahụ́ Ụlọ obibi nke B, kụchaakwa ya gbamgbam. Ụlọ obibi nke B bụ ụlọ obibi ikpeazụ a rụrụ. A rụchakwara paseeji niile si n’elu jikọta ụlọ na ụlọ. Ndị na-achọ ala mma malitekwara ịchọ ọtụtụ ala mma.